Sida loo yareeyo isticmaalka CPU iyo RAM ee Google Chrome iyo Firefox ee Android | Androidsis
Daaqadaha shabakadu waa lama huraan markay tahay booqashada bog cayiman, laakiin mararka qaarkood waxay ku dhaliyaan isticmaalka batteriga badan taleefanka. Waxaan la qabsanay inaan isticmaalno tab badan oo aan ilaawno inaan xiro, tani ayaa sameysa taleefanka ayaa ka dhigaya inay furan yihiin oo wuxuu cunaa RAM iyo CPU labadaba.
Si aad u isticmaasho barnaamijyada sida Google Chrome ama Mozilla Firefox Waxa ugu fiican ayaa ah inaad aragto waxa aad cunayso inta ugu badan, ha ahaato baarkooda aan soo sheegnay ama xitaa fidinta caanka ah haddii aad mid rakibtay. Si aan ugu diyaargarawno, waxaan ubaahanahay inaan waqti u hurno markasta oo aan awoodno oo aan qaadno dhowr talaabo oo aan ku qaban karno anagoon wax badan cunin.
1 Xir dhammaan tabta
2 Tayaynta kheyraadka
3 Adeegso qaabka aasaasiga ah ee Google Chrome
4 Firefox horeyba waa loo hagaajiyay
Xir dhammaan tabta
Mid ka mid ah waxyaabaha aysan dad badani qaban ayaa ah inuu xiro taabashada labada daalacda, Google Chrome badiyaa waxay furmaysaa midkasta markasta oo aad sameyso raadinta cusub, isla waxay ku dhacdaa Mozilla Firefox. Mid kastaa wuxuu ula macaamili doonaa sidii bog furan, markaa haddii aad ka badan tahay toban, waxaa habboon in mid mid loo xidho.
Burcad Google Chrome ama Mozilla Firefox qalabkaaga Android
Xaaladda ugu horreysa (Chrome) ee xirto tabs kaliya furo furaha qalabkaaga, raadi sanduuqa leh lambar ku xiga URL-ka, dhagsii oo mid mid u xiro, sidoo kale waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad dhammaantood xirto hal mar haddii aad gujiso saddexda qodob ee midig oo guji «Xidho dhammaan tabs»
Firefox in la xiro tab tab waa isku mid Markaad xireyso codsiyada ku yaal Android, guji kaliya "X", haddii aad dooneysid in dhammaantood la xiro, dhagsii saddexda jibbaaran ee ku yaal dhinaca midigta sare oo dhagsii "Xidho daaqadaha oo dhan"
Hubi in bogga hawsha hore ee codsi la hawlgeliyey, bogagga ayaa si dhakhso leh u furi doona, Chrome waxay horay u soo rartaa xiriiriyeyaasha ay xisaabinayaan waad furi kartaa. Si aad udhaqaajiso tan waa inaad ku sameysaa waxyaabaha soo socda biraawsarka Android:
Ku fur barnaamijka Google Chrome
Soo gal xulashada "Settings" oo guji Asturnaanta iyo amniga
Dhaqaaq "Hore u soo rar boggaga si aad si dhakhso ah ugu baartid iyo raadin"
Adeegso qaabka aasaasiga ah ee Google Chrome
Habka aasaasiga ah ee Google Chrome wuxuu yareeyaa taraafikada webka, maadaama ay adeegsanayso adeegaha Google ka hor inta aysan ku soo dejisan qalabkaaga. Server-ka Google way fududeyn doonaan si culeysku u dhakhso badan yahay isla markaana isticmaalka CPU iyo RAM-ka aaladdaada ku jira ay ka hooseeyaan.
Si aad udhaqaajiso qaabka aasaasiga ah ee Google Chrome samee waxyaabaha soo socda:
Ku fur barnaamijka Google Chrome taleefankaaga / kiniinkaaga
Midigta kore dhagsii
oo mar gudaha guji Guji
Ka hooseeya «Dejinta horumarsan» Habka aasaasiga ahi wuu muuqdaa, wuu dhaqaajiyaa wuxuuna xidhayaa goobaha lagu rido nidaamkaas
Firefox horeyba waa loo hagaajiyay
Injineeradu waxay doonayeen Mozilla Firefox in la wanaajiyo markay bilaabanto oo ay xirmayso, iyagoo aad ugu dheereeya xamuulka bogga. Kiiskaaga uma baahnid inaad wax qabato, kaliya si joogto ah u isticmaal oo xir tabsiyadaada si ay u sii socoto sidii maalinta koowaad.
Waxa kaliya ee aan sameyn karno waa tirtirida xogta daalacashada markii aan baxeyno (waa la damiyay) oo tirtir xogta biraawsarka, tan ayaa lagula talinayaa. Labada ikhtiyaar waxay ka dhigi doonaan inay qulqulaan wax badan culeyskuna wuxuu kuu oggolaanayaa inaad xawaareyso aaladda bog kasta oo internet ah oo aad si joogto ah u booqato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo yareeyo isticmaalka CPU iyo RAM ee Google Chrome iyo Firefox ee Android
Sida loo helo shaandhooyinka iyo saameynta sheekooyinka Instagram